Samaynta Xaashida Birta ah, Beerista alxanka, Samaynta Tube - THYH
Waxaan Bixineynaa Alaabo Tayo Sare Leh
Habee Laabista Steel Oo CNC Laser Goynta S ...
Magaca Badeecada Habee Laabista birta iyo mashiinka jarjarada mashiinka mashiinka jarjarada birta birta birta / kaarboonka birta / birta galvanized Midabka iyadoo la raacayo naqshadeynta macaamiisha naqshadeynta habka caadiga ah ee soo saarista> goynta laser laser> foorarinta birta> alxanka iyo nadiifinta> Daaweynta dusha sare (Dahaarka budada) )> Qaybaha isku dhafan iyo baakadaha. Gawaarida dalabka, alaabta guriga, mashiinka, korontada, iyo qeybaha kale ee birta ee xirxiraya Badaha Standard ...
Qingdao TianHua Yihe Macdanta Macdanta oo ku taal magaalada quruxda badan ee dekedda leh ee Qingdao, waxaan leenahay 20 sano oo waayo-aragnimo ah soo saarista alaabada macmalka ah ee birta ah.Waxaan bixinnaa xalal been abuur bir ah oo caadiya marka loo eego shuruudaha macaamiisha, waxaa ka mid ah naqshadeynta noocyada, sawir qaadista, soo saarista, xakamaynta tayada. , warbixinnada, daabacaadda, baakadaha, rarka weelka iyo gaarsiinta xalka. Adeegyadeena ugu badan ee soosaarida birta waxaa kamid ah birta xaashida iyo sameynta tuubada, waxaa kamid ah goynta birta (miinshaar, leysar, olol, plasma), foorarinta birta (xaashida isku laab, tubada / usha / qaybta foorarsiga, tubbada isku duuban), shaabad bir ah, sawir qoto dheer, feer CNC, alxamid iyo been abuur, isu imaatin iyo dusha sare.
Dhacdooyinka & Wararka
Qoondaynta xaaladaha ka shaqaynta biraha
Xaaladaha ka baaraandegidda birta waxaa ka mid ah heer-kulka qaab beddelidda, xawaaraha cilladda iyo qaabka cilladda. Heerkulka cillad-darrada: Kordhinta heerkulka cilladda biraha waa tallaabo wax ku ool ah oo lagu hagaajinayo been-abuurka biraha. Inta lagu jiro habka kuleylka ee biraha, sida temperatu kululaynta ...
Mabda'a iyo sifooyinka waxqabadka ee mashiinka CNC iyo farsamada wax soo saarka
1 Mabda 'tiknoolajiyada tiknoolajiyada mashiinka CNC waxaa loola jeedaa adeegsiga qalabka mashiinka CNC iyo aaladaha kale ee wax lagu farsameeyo si loo soo saaro loona farsameeyo qeybaha farsamada. Codsiyada gaarka ah, teknoolojiyada makiinada CNC ayaa qiyaas ahaan loo qaybinkaraa laba qaybood, kuwaas oo kala ah qaybta softiweerka iyo qalabka '...
Sidee waa in loo ilaaliyaa qalabka mashiinka CNC maalin kasta?
Dayactirka maalinlaha ah ee mashiinada CNC waxaa kamid ah: kormeer maalinle ah, kormeer todobaadle ah, kormeer bille ah, kormeer seddex biloodle ah, iyo kormeer sanadle ah. Dayactirka kahortaga ah ee qalabka mashiinka CNC waa sida soo socota: 1. Kormeerka maalinlaha ah ee qalabka makiinada CNC ee mashiinka CNC mashariicdeeda ugu waaweyn inclu ...